Tratra teo Andavamamba ny rongony hamatsiana an’Ambohimanarina
Eny Ambohimanarina no voalaza fa amoahan’ilay mpanao trafika ana rongony ireo entana tratra teny aminy, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny polisim-pirenena. Lehilahy 45 taona no voasambotry ny polisy avy ao min’ny PPA 3 Ilanivato ny 29 janoary noho ny resaka fivarotana rongony. Ny marainan’ny 29 janoary dia naharay antso avy amin’ny olona tsara sitrapo ny polisy miasa ao Ilanivato fa misy lehilahy ahiahiana ho mitondra rongony teo Andavamamba. Nidina teny an-toerana nanamarina ny vaovao ny mpitandro ny filaminana ka nahita olona mampiahiahy tokoa. Avy hatrany dia notazomina io lehilahy io ary nosavaina. Rehefa nojerena ny kitapo nentiny dia nahitana fonosana rongony miisa 14 sy ravina rongony tsy mbola mifono 300 grama. Notazomina avy hatrany izy ka nentina teny amin’ny biraon’ny polisy Ilanivato natao famotorana. Tao anatin’ny fanadihadiana no nahafantarana fa saika hivarotra ireo rongony ireo teny Ambohimanarina izy. Nilaza ihany koa izy fa 500 ariary no hangalany ny fonosana 1 ary amidiny 1 000 ariary izany.